I-ComShs EarShot IFB Ingabiza Izindleko Zokukhiqiza eziphansi | Izindaba zeNAB | I-2020 NAB Show Media Partner kanye noMkhiqizi we-NAB Show LIVE. Izindaba Zobunjiniyela Zokusakaza
Kwethulwa i-PrimeTime's LED Remote Broadcast Kit
"Umbukiso wamagajethi" Ubuyela kuChannel 5 nge-ATEM Mini Pro
I-Lectrosonics Yethula i-DCHR Miniature Stereo Digital Receiver
Ikhaya » Okufakiwe » IComrex's EarShot IFB Ingabiza Izindleko Zokukhiqiza Phansi
IComrex's EarShot IFB Ingabiza Izindleko Zokukhiqiza Phansi
Noma ikuphi ukukhiqizwa uchwepheshe wezokusakaza azama ukusetha ngeke nakanjani kubadle isikhathi esiningi uma kukhulunywa ngobuqambi obudingekayo ukuze okuqukethwe kwenziwe futhi kuhleleke. Kepha izindleko zokukhiqiza zodwa zizofinyelela kuhlobo lwezinkampani ze-chunk ezifana I-Comrex sebenza ukunciphisa, futhi zabo I-EarShot IFB kungenye yamathuluzi amaningi ekusungulweni kwabo ukusiza ukwenza lokho ezintweni eziningi eziklanyelwayo esimisweni sethu semvelo esidijithali.
Kusukela inkampani yaqala ukusekelwa emuva ngo-1961, I-Comrex Usebenze njengendondo yokuthuthuka kwezobuchwepheshe ngokusebenzisa ubuchwepheshe obusha nobusha bomsakazo nethelevishini kahle ngaphambi kokukwenza kufinyelele phambili. I-Comrex ukwakha nokwakha imishini esebenzisa ubuchwepheshe obuthuthuke kakhulu bokuxhuma abasakazi nababukeli babo. Le nkampani isebenza ngokwakha amathuluzi athembekile, ansebenziseka kalula onjiniyela abangawethemba ukuthi bawasebenze, noma besakaza kakhulu.
Iminyaka ecishe ibe ngamashumi ayisithupha, I-Comrex ukhiqize imishini yokusakaza esezingeni eliphakeme kakhulu esetshenziswa ngabasebenza emsakazweni nakuthelevishini emhlabeni wonke. Eziningana AmaComrex imikhiqizo ifaka i-ACCESS yayo ehamba phambili embonini kanye nama-codecs we-BRIC-Link IP audio. Lawa madivayisi asebenzisa izinhlobo ezahlukahlukene zokusetshenziswa kwezithuthi zokulalelwayo, futhi lokho kufaka phakathi ukudlala kwezemidlalo nokudlala, i-voiceover, izixhumanisi ze-studio-transmitter, nokuningi.
I-Liveodot IP video codec iyona enikela kuphela amaselula (noma i-IP) yomkhakha, futhi inikezela abasebenzisi ngevidiyo enezindlela ezimbili, kanye nama-IFB amabili. Lokhu kuyenza ibe yisixazululo esiphelele se-wireless newsgathering sehardware. Ngokuhlanganisa iziteshi eziningi zedatha, kanye ne-Adaptive Management EngineAll yomkhakha AmaComrex ama-codecs, kufaka phakathi i-CrossLock VPN Technology, asiza ukuhlinzeka ngezinga elingaqhathaniseki lokwethembeka kokudluliselwa komsindo wekhwalithi ephezulu kanye / noma ividiyo kwi-Intanethi yomphakathi. Le nkampani futhi inikezela ngezixazululo zokuxoxisana nabavakashi kufaka phakathi izinhlobo zokuxhumana ngocingo zePOTS neVoIP kanye nesango lomsindo le-IP elibizwa ngokuthi i-Opal yezivakashi ezingochwepheshe.
The UKUFINYELELA futhi I-BRIC-Xhumanisa Ama-codecs e-IP alalelwayo asebenzisa ubuchwepheshe obudlulayo bokudlulisa umsindo ukuze aqinisekise ukusakazwa okuthembekile ngezinhlelo zenethiwekhi ze-IP eziyinselele. Ngenxa yeminyaka yokuhlangenwe nakho ku-IP, I-Comrex wakwazi ukuthuthukisa I-CrossLock amathuluzi angabhekana nezidingo ezihlukile zokuhambisa ividiyo, ngokuthuthukisa ezazo I-LiveShot Ubuchwepheshe bevidiyo ye-IP. Futhi le mizamo ihlanze ubuchwepheshe babo be-hybrid ngocingo ngemikhiqizo efana VH2, futhi okusha, umhlaba ongabizi kakhulu ungenziwa ngemikhiqizo efana ne I-EarShot IFB, okwenza izindleko zesabelomali zokukhiqizwa komsakazi ziphansi kakhulu.
I-Comrex's EarShot IFB
AmaComrex I-EarShot IFB uhlelo olusekwe nge-Hardware olunikeza okuphakelayo okulalelwayo okubukhoma kubashayeli bezingcingo. The I-EarShot IFB ihlinzeka abasakazi ngohlelo lwe-studio bukhoma olususelwa ocingweni kanye nomsindo we-IFB ekusakazweni okude okususelwa kude njengemibiko ye-TV ENG. Cishe abangaba ngu-30 abashayela izingcingo bangashayela futhi balalele okuphakelayo okulalelwayo, okwenza sikwazi ukubuyisela imigqa efinyelela ku-30 ​​yePOTS ngebhokisi elilodwa elilula.
Ngoba iziteshi eziningi zisasebenzisa imigqa yePOTS (Plain Old yocingo) ukuhambisa izifunzo zazo ze-IFB, isidingo sabasakazi beTelevishini bokwehlisa izindleko futhi bahlale ngaphakathi kwesabelomali iba sibaluleke kakhulu, ikakhulukazi uma ukusetshenziswa kwemigqa yePOTS kuphumela ekushiseni imali engaphezu kwaso kwenza. I-Comrex Wakha I-EarShot IFB ukuletha amandla we-VoIP (Voice-over-IP) kubuchwepheshe be-IFB.
Izici eziningana ze I-EarShot IFB zihlanganisa:
Okokufaka okune kokulalelwayo (okubili okungakhelwe i-IFB)
Iyakwazi ukubamba abantu abafinyelela ku-30
Ukuphakelwa komsindo okukhethiwe
Ubuchwepheshe obonga izindleko be-VoIP
Isebenzisa i-G.711, futhi ingalungiswa ngomsindo wekhwalithi ephezulu
Ngeminye imininingwane mayelana I-EarShot IFB, vakashela i-www.comrex.com / product / earshot-ifb /.
Kungani I-Comrex Muhle Umkhakha Wokusakaza
Uma kukhulunywa ngomkhakha wezokusakaza, nobuqambi bokuwusebenzisa, akukho okusho ukuthi akuvezi ukuthi ifakwe kahle kangakanani nabasebenza abanamakhono kakhulu futhi nohla lwamagama ohlobo oluhlukile. Inkampani efana I-Comrex okhiqize imishini yokusakaza esezingeni eliphakeme kakhulu, futhi ngebhonasi engeziwe yezindleko eziguqukayo, abasakazi banegumbi elithe xaxa ukusebenza emikhiqizweni yabo ngezinkinga ezingaphansi kwesabelomali babambe amandla amakhulu abasiza okuqukethwe kwabo kanye nomkhiqizo abawuxhasayo.
Ukuze uthole ukwaziswa okwengeziwe I-Comrex, vakashela, www.comrex.com /.
Ukufinyelela I-codec yomsindo ye-BRIC-Link IP Injini yokusakaza Ukusakaza Ubuchwepheshe imboni yokusakaza ukusakaza uchwepheshe CES2017 I-Cobalt Encoder I-Comrex imvelo yedijithali I-EarShot IFB I-Graham Chapman i-Prmoted to Editor I-Litra Liveodot IP video codec Matthews AMAPOTA Ama-spears nama-Arrows Ubuchwepheshe be-TV I-Ultra HD Forum Umlingisi wevidiyo 2020-05-11
Ngaphambilini: I-Xilica Iqala 'iGenius' Uhlelo Lokuqeqeshwa Lomhlaba Wonke
Olandelayo: I-Focal Point Productions isebenzisa i-ATEM Mini ukusakaza bukhoma izingxoxo ze-GBMC HealthCare System
Umkhiqizi Wocwaningo / Wokugcina Amarekhodi / Wokususa
I-Office PA / Runner